UEC အဖွဲ့ဝင်ငါးဦး ထွက်ပြေးဖို့ကြံနေပြီး နိုင်ငံတကာက အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ထွက်ပြေးနေကြပြီဆိုတာတကယ်လား? တပ်မတော်က အိမ်စောင့်အစိုးရဖွဲ့နေပြီဆိုတာကော? – Think Before You TRUST
Home>>ရွေးကောက်ပွဲ>>UEC အဖွဲ့ဝင်ငါးဦး ထွက်ပြေးဖို့ကြံနေပြီး နိုင်ငံတကာက အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ထွက်ပြေးနေကြပြီဆိုတာတကယ်လား? တပ်မတော်က အိမ်စောင့်အစိုးရဖွဲ့နေပြီဆိုတာကော?
တွေးပြီးမှယုံDecember 10, 2020
ဒီသတင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၈ရက်နေ့က မင်းကိုကိုဦး အမည်နဲ့ Facebook အကောင့်တစ်ခုကနေ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတုထဲမှာဆိုရင် “UEC အဖွဲ့ထဲက (၅)ဦးပြေးဖို့ကြံစည်နေကြတယ်။ အကြံပေးဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း အတော်များများပြန်ပြေးနေကြပြီ။ လက်ရှိ ၁၀ယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အမျိုးဖျက်သစ္စာဖောက်မ၊ အသားထဲက ထွက်တဲ့လောက်မကြောင့် သူများနိုင်ငံလာပြီး၊ ခြယ်လှယ်ချင်တိုင်း ချယ်လှယ်တဲ့သူတွေ၊လက်ပါးစေတွေကိုဒီတိုင်းလွှတ်မပေးနိုင်ဘူး။ တပ်မတော်ကတော့ အိမ်စောင့်အစိုးရဖွဲ့ပြီးပြီလို့လဲ သိရတယ်” ဆိုပြီး ယခုလို ရေးထားပါတယ်။
ဒီသတင်းကို တွေးပြီးမှယုံက တွေ့ရှိချိန်မှာတော့ Like နဲ့ React ပေးသူ ၁ထောင်ကျော်ရှိနေပြီး ပြန်လည်မျှဝေထားသူ ၅၃၆ ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တွေးပြီးမှယုံက ဒီသတင်းတုကို စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာ
NLD ပါတီရဲ့ ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး မုံရွာအောင်ရှင်ကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ UEC အဖွဲ့ထဲက (၅) ဦးပြေးဖို့ကြံနေတယ်ဆိုတဲ့ “သတင်းက သတင်းအမှားပါ။ ဒါမျိုးမရှိပါဘူး။ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပြန်ပြေးနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကလည်း လုပ်ကြံရေးသားထားတဲ့ သတင်းအမှားသာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက ငှားထားတဲ့အကြံပေးတစ်ချို့ကလည်း သူတို့ရဲ့ Project ပြီးရင်တော့ ပြန်တဲ့သူတွေတော့ရှိပါတယ်။ ပြန်ပြေးနေကြတယ်ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ တပ်မတော်က အိမ်စောင့် အစိုးရ ဖွဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့ သတင်းကလည်း နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုကို ခုတုန်းလုပ်ပြီး ပြည်သူတွေအနေနဲ့ တပ်မတော်အပေါ် အားကိုးလာအောင်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။
NLD ပါတီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာလည်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေအတော်များများပြန်ပြေးနေကြပြီဆိုတာ သတင်းအမှားပါ။ ခိုင်လုံတဲ့အချက်အလက်နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက် သတင်းအမှားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း များများစားစား ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းအမှားပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ် လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။
သတင်းတုတင်ထားတဲ့ မင်းကိုကိုဦးဆိုတဲ့ အကောင့်ကိုလည်း တွေးပြီးမှယုံဘက်က သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ပြန်လည်ဖြေကြားတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီသတင်းတုမှာဆိုရင် အချက်အလက်မှားတွေသာမက အမျိုးဖျက်သစ္စာဖောက်မ၊ အသားထဲက ထွက်တဲ့လောက်မစတဲ့ စွပ်စွဲပြစ်တင်တဲ့ အရေးအသားတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ အမုန်းစကားတွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်တဲ့အခါမှာ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ဖတ်သင့်ပြီး မှန်မမှန် စစ်ဆေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ တရားဝင်သတင်းဌာနက သတင်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တရားဝင် Page တွေက သတင်းတွေကိုသာယုံသင့်ပါတယ်။ သတင်းစစ်ဆေးဖို့အခက်အခဲရှိခဲ့ရင်လည်း တွေးပြီးမှယုံ ရဲ့ Chat box ဒါမှမဟုတ် အချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန်ပန်ကြားလွှာမှာ အချက်အလက်ဖြည့်သွင်းပြီး လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်။